Sara Ali Khan filimka lagu soo caan bixin lahaa Kedarnath oo bur buri rabo iyo dacwad shirkada iska leh Director Abhishek Kapoor ku furtay – Filimside.net
Sara Ali Khan filimka lagu soo caan bixin lahaa Kedarnath oo bur buri rabo iyo dacwad shirkada iska leh Director Abhishek Kapoor ku furtay
Uma wanaagsano Sara Ali Khan aqbaarta maanta ugu weyn ee Bollywood-ka ka jirto madaama gabadhaan Saif Ali Khan iyo Amrita Singh waalidka u yihiin filimkeeda Kedarnath uu bur buri rabo ama shaqadiisa meel dhexe looga tagi rabo!
Shirkada KriArj entertainment oo filimka Kedarntah maal galineyso ayaa dacwad rasmi ah Director Abhishek Kapoor maxkamada kaga gudbisay oo ah inuu qarashaad dheeri ah galiyay sidoo kalena kasoo bixi waayay masuuliyada loo idmaday.
Shirkada KriArj entertainment ayaa sheegtay in Abhishek Kapoor qarash 40 Crore ah uu galiyay sidoo kalena balanka ahaa in June 2018 filimka Kedarnath shaqadiisa lagu soo idleeyo uu hada sheegay Abhishek inuusan ku dhameyn karin oo shaqada filimkaan ilaa August 2018 sii socon doonto qarashaad dheeri ah loo baahan yahay.
Sidoo kale shirkada KriArj entertainment iyo shirkada T Series oo filimkaan wax ka maal galineyso waxay Abhishek Kapoor ku heestaan inuu horey kaligiis ugu dhawaaqay in filimka Kedarnath uu tiyaatarada kula dagaalami doono SRK filimkiisa Zero oo 21 December 2018 la daawanayo.
Sara Ali Khan iyo Sushant Singh Rajput oo filimkaan hogaamiyaal ka ah inta badana duubeen hada waxay sameeyaan ma garanayaan marba hadii Director Abhishek Kapoor iyo shirkada KriArj entertainment meel xun arinka ka mareyso dacwada meesha ka dhalatay.
Sidaa darteed Kedarnath wuxuu u egyahay mashruuc lagu kala tagaayo sidoo kalena aan noqon karin filimka Sara Ali Khan lagu soo caan bixinaayo.